15-ka May maainta dhalinyarada oo laga xusay magaalada Kismaayo – All Bajuni
15-ka May maainta dhalinyarada oo laga xusay magaalada Kismaayo
Ayadoo maanta ay ku beegantahay maalinta dhalinyarada islamarkaana ku asteeysan maalintii la aasaasay ururkii gobonima doonka dhalinta Soomaaliya ee usoo halgamay xoriyadda dalka ayaa waxaa maanta munaasibad lagu xusayo lagu qabtay magaalada Kismaayo.
Munaasibaddan oo uu soo qabanqaabiyay ururka dhalinyarada Jubaland ayaa ahayd mid aad u ballaaran, ayadoo boqollaal dhalinyaro ah oo ku labisnaa fanaanado cadcad oo ay ku xardhanaayeen hal-kudhigyo ay ku weeyneeynayaan 15-ka May ayaa socod dheer kusoo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo.
Dhalinyarta ayaa ugu danbeyn isugu tagay hoolka shirarka Daawad, halkaa oo ay kusugnaayeen madax ka tirsan Jubaland oo uu kamid ahaa gudoomiyaha baarlamanka Mudane Cabdi Max’ed C/raxmaan, madaxweeyne kuxigeenka 2-aad Mudane C/qaadir Xaaji Max’uud (Lugadheere) iyo xubno ka tirsan labada gole ee Jubaland.
Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka J/hoose Axmed Faarax Taqal oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa hambalyo ku aadan maalintan u diray dhalinta Soomaaliyeed, isagoo sheegay in dhalinyaradu hadii ay isku duubanyihiin ay isbadal dhab ah sameyn karaan.
Wasiirka arimaah bulshada Jubaland Max’ed Ibraahim Max’uud oo kamid ahaa masuuliyiintii goobta ka hadashay ayaa dhalinyarada ugu hambalyeeyay munaasibadda maalintan 15-ka May, isagoo sheegay in loo baahanyahay in dhalinyaradu u istaagto sidii loo samatabixin lahaa dalka islamarkaana looga shaqeyn lahaa nabadda.
Madaxweeyne kuxigeenka 2-aad ee Jubaland C/qaadir Xaaji Max’uud Lugadheere oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin xusuus mudan isagoo sheegay in dhalinyaradu ay yihiin lafdhabarta Bulshada, wuxuuna ku baaqay in dhalinti ka shaqeeyso sidii looga shaqeyn lahaa horumarka dalka islamarkaana loo wacyigelin lahaa dhalinyaro uu sheegay in fikirro qaldan laga dhaadhiciyay.
Gudoonka baarlamanka Jubaland Cabdi Max’ed C/raxmaan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay in uu hambalyo u dirayo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed, isagoo si gaar ah ugu hambalyeeyay ururka dhalinyarada Jubaland, wuxuuna xusay in Jubaland ay marwalba qirsantahay in dhalinyaradu muhiimad gaar ah u leeyihiin bulshada.
15-ka May ayaa ah maalin ku weyn umadda Soomaaliyeed, waana maalintii la aasaasay ururkii bulshada u horseeday nabadda iyo baraaha ee SYL.